Ukhokhela izifundo zobudokotela zentombazane esencane edinga usizo: Ngemuva kweminyaka engu-11, usindisa impilo yakhe - I-Tepe RELAY
Accueil » IMPILO YAMI Ukhokhela izifundo zobudokotela zentombazane encane edinga usizo: Ngemuva kweminyaka engu-11, usindisa impilo yakhe
Kunemfihlo yokuphila elula abantu abavame ukuyikhohlwa noma abangayinaki ngokuphelele: lapho unikeza okuthile ngendlela engenabugovu ngokuphelele, kungenzeka ukuthi uthole okuthile emuva. Futhi yize abanye abantu becabanga ukuthi umusho nje olula, owesilisa uzimisele ngokuqinisekisa ukuthi kunjalo.
i-pinholeimaging / Shutterstock.com
Indaba ethokozisayo yendoda esindiswe ngudokotela ayekade eyisiza eminyakeni eyi-10 edlule isanda kwenza i-buzz ezinkundleni zokuxhumana
Le ndoda isize intombazane egama layo linguTam Ling e2008, kulandela ukuzamazama komhlaba esifundeni saseSichuan eChina okuthinte yena nomndeni wakhe.
Indlu yabo yacekeleka phansi ngenxa yokuzamazama komhlaba neTam Ling, njengomdala wezingane zakubo, kwakumele anakekele odadewabo abancane abancane ngoba uyise wayephethwe kabi futhi umama wakhe wayegula.
Le ndoda, egama linguZheng Hua, yahlangana noLing futhi yamzwela: isimo sayo sayikhumbuza ngobuntwana bayo. Akazange ameluleke kuphela ukuthi abhalise esikoleni sezokwelapha kodwa wabuye wakhokhela nezifundo zakhe nezezi ezimbili zakhe odade, ngaphezu kokubanika imali ephaketheni.
Ngemuva kweminyaka eyishumi nanye, uTam Ling, owaba udokotela wamehlo, wakwazi ukubuyisa isisa kuHani ngokusindisa impilo yakhe.
Lapho ezwa ukuthi le ndoda ebimsizile kudala ubehlushwa i-aneurysm yamakhokho futhi izodluliselwa esibhedlela lapho ebesebenza khona, uLing umenzele konke.
Wamsiza kulenqubo yokwamukelwa, wasayina amaphepha waze wamphelezela kuzo zonke izivivinyo ezidingekayo.
Eminyakeni engu-11 edlule, ngamfaka esikoleni sezokwelapha. Ngemuva kweminyaka eyishumi nanye, wasindisa impilo yami! Bengifuna ukuxoxa le ndaba ukukhuthaza abantu ukuthi bakhombise umusa!
UTom Wang / Shutterstock.com
Le ndaba eshukumisayo ifakazela ukuthi zonke izinto ezincane esizenzayo, lonke ukumamatheka esikunikezayo, zonke izinhlobo zothando nazo zonke izenzo zomusa ziyohlala zingezethu. Faka isicelo sokuletha okuthile okuhle kulomhlaba!
Kwiblogger, egqoke iziketi ezimfishane ngemuva kweminyaka engu-50, abalandeli bayo bavuma ngokuphelele!